लक डाउनमा २३ बलात्कार
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७ समय: ९:२८:०३
ओसिएमसी इनरुवाले लक डाउनको अवधिमा २३ वटा बलात्कारका घटना भएको जनाएको छन् । जसमा १९ देखि ४९ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । ओसिएमसी इनरुवाको तथ्याङक अनुसार वर्ष भरीमा ७३ वटा यौनजन्य हिंसा भएका छन् । जसमध्ये ६३ वटा बलात्कारका केस दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक १० वटा बलात्कार प्रयासका रहेका छन् ।
इनरुवा अस्पतालमा आधारिक एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अवधि भरको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त तथ्याङक सार्वजनिक गरेको हो ।यूएनएफपीएको पहलमा स्थापना भई हिंसामा परेकाहरुको उपचार सहित आवश्यक परामर्श र कानुनी बाटो पहिल्याउन ओसिएमसीले सहजिकरण र सहयोग सहितको आवश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ओसिएमसी इनरुवाकी फोकल पर्सन भुमी धामीका अनुसार गत आ.व.२०७६।०७७ मा ३ सय ७२ वटा केश दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको जम्मा केश मध्ये सेवा लिने पुरुषको संख्या भने २ मात्र छ । बाँकी सबै पीडितमा महिला रहेका छन् । धामीका अनुसार शारीरिक हिंसामा परेका १ सय ९० जनालाई ओसिएमसीबाट सेवा दिइएको छ । घरेलु हिंसाका ९९, बेचबिखनमा १ र अन्य ९ केशमा पीडितलाई आवश्यक कानुनी परामर्श सहितको उपचार लगायतका सेवा प्रदान गरिएको धामीले बताइन् । धामीले धेरैजसो केश प्रहरी मार्फत आउने गरेको बताइन् ।ओसिएमसीका अनुसार बाहिर आउने केश अधिकांशजसो स्थानीय स्तरमा कुरा नमिलेपछि मात्र आउने गर्छन् । जसले गर्दा समेत धेरैजसो घटना गाउँ समाजमै अझपनि दब्ने र दबाउने गरिएको छ ।
धामीका अनुसार दबाउने परिपाटी अझैपनि कायम छ । डर र त्राससँगै कतिपय अवस्थामा पारिवारीक दबाबका कारण समेत पीडित घटना खुलाउन बाध्य छन् । जसलाई चिर्न आवश्यक छ । त्यसकालागि कानुनी ज्ञान र स्वयं सचेतना जरुरी छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा यौन जन्य अपराध सम्वन्धि भएको व्यवस्था
जबर्जस्ती करणी (बलात्कार). जबर्जस्ती करणीमा कहिले उजुरी गर्नुपर्दछ ?
हदम्याद : सकेसम्म तुरुन्तै उजुरी गर्नुपर्दछ, नभएमा जबर्जस्ती करणी भएको १ वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नु पर्दछ, नत्र भने उजुरी लाग्दैन ।
जबरजस्ती करणीमा कसले उजुरी गर्न सक्दछ ?
जबर्जस्ती करणीमा पीडित आफैँले वा पीडितको परिवार, आफन्त वा जोसुकैले उजुरी दिन सक्दछ । जबर्जस्ती करणीमा पीडित आफैँले वा पीडितको परिवार, आफन्त वा जोसुकैले उजुरी दिन सक्दछ ।
घरेलु हिंसाको समाधान गर्न सम्भव छ, तर त्यसकालागि सबैको संयुक्त पहल हुन आवश्यक छ । घरेलु हिंसाबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न हामी राम्रोसँग तयार हुनुको साथै हिंसा सह्य नहुने घर, कार्यस्थल तथा समुदाय बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हाम्रो कार्यस्थलमा त्यस्ता सवालका बारेमा मौनता तोड्न सक्यौं भने हिंसाको चक्रलाई रोक्न सकिन्छ ।